Air Canada dia mandefa serivisy vaovao tsy an-kiato eo anelanelan'ny Montreal sy Kelowna
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Air Canada dia mandefa serivisy vaovao tsy an-kiato eo anelanelan'ny Montreal sy Kelowna
Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ity zotra vaovao ity dia manampy amin'ny fiatraikany lehibe misy eo amin'ny Air Canada amin'ny toekarena eo an-toerana sy ny an'ny faritanin'i British Columbia iray manontolo.
Sidina tsy miato in-dimy isan-kerinandro eo anelanelan'ny Montreal sy Kelowna.
Mampifandray ny Okanagan Valley an'ny sidina miaraka amin'ny sidina tsy miato amin'ny hub Air Air Canada rehetra: Montreal, Toronto, Vancouver ary Calgary.
Ny fiaramanidina Airbus A220-300 izay mahomby amin'ny solika any Canada dia hampiasaina amin'io zotra io.
Nankalazaina tao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Kelowna androany ny zotra vaovao farany an'ny Air Canada izay misy hany serivisy tsy mijanona eo anelanelan'ny Montreal sy Kelowna. Miasa intelo isan-kerinandro ny sidina, miakatra inefatra amin'ny tapaky ny volana Jolay ary in-dimy amin'ny volana Aogositra. Ny fiaramanidina Airbus A220-300 izay mahomby amin'ny solika any Canada dia hampiasaina ao anatin'io zotra io.
Ity zotra vaovao ity dia manampy amin'ny fiantraikany lehibe Air Madagascar dia manana ny toekarena eo an-toerana sy ny an'ny faritanin'i British Columbia iray manontolo. Alohan'ny areti-mandringana COVID-19, ny Air Canada dia nanolotra vola mitentina 2.2 miliara dolara ho an'ny harin-karena faobe ao amin'ny BC, isan-taona. Ho fanampin'izany, Kelowna dia mifandray amin'ny foiben'ny kaompaniam-pitaterana efatra izay mampitohy ny Lohasahan'i Okanagan mivantana amin'ny tamba-jotra lehibe manerantany an'ny Canada Canada, fijanonana iray.
“Faly izahay fa handefa ny serivisy tsy mijanona eo anelanelan'ny Montreal sy Kelowna, mampifandray toerana fizahan-tany roa malaza amin'ny Quebecers sy British Columbians. Ny sidina vaovao eto amintsika Air MadagascarNy Airbus A220-300 somary mangina sy milamina amin'ny tontolo iainana dia ara-potoana ihany koa miaraka amin'ny fifandraisana amin'i Atlantika Kanada sy any ivelany amin'ny alàlan'ny foibenay Montreal. Rehefa misokatra indray ny firenena dia faly izahay manampy ny namana sy ny fianakaviana hiaraka, ary hanohana ny indostrian'ny fanarenana ara-toekarena sy ny fizahan-tany any Kanada. Fantatray fa faly ny olona handeha indray, ary manantena ny handray ireo mpanjifantsika an-tsambo izahay, ”hoy i Mark Galardo, filoha lefitra zokiny, ny fandrindrana ny tambajotra ary ny fitantanana vola miditra ao amin'ny Air Canada.
"Ny mpiara-miasa tsy mivadika Air Canada dia manaporofo indray fa manome lanja ny mpandeha izahay amin'ity zotra vaovao Montreal-Kelowna ity," hoy i Philippe Rainville, filoha sady CEO an'ny ADM. “Mihena ny serivisy avy amin'ny seranam-piaramanidina YUL Montréal-Trudeau amin'izao fotoana izao ary voafetra ihany ny safidy fitsangatsanganana, ny fanatontosana ity toeram-pialan-tsasatra kanadiana vaovao ity dia tonga amin'ny fotoana mety! Fotoana mety tsara ho an'ny Quebecers ity hahitana ny famirapiratan'i Canada Andrefana amin'ny fiarovana tanteraka, amin'ny sambo fiaramanidina Airbus A220-300 vaovao, izay mangina kokoa ary mivory ao Mirabel (YMX), miaraka amin'ny fahalalàn'ny eo an-toerana. Tsy afaka nangataka bebe kokoa izahay! ”
"Ny serivisy tsy an-kijanona ataon'ny Air Canada Montreal-Kelowna dia marika lehibe iray ahafahan'ny YLW mitondra dia eo anelanelan'ny Quebec sy ny faritra Okanagan," hoy i Sam Samaddar, talen'ny seranam-piaramanidina, YLW - seranam-piaramanidina iraisampirenena Kelowna. “I Montreal dia faritra iray manan-danja amin'ny fizahan-tany any Okanagan ary niasa an-taonany maro izahay hanatanterahana izany fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina izany. Manantena ny fandraisana ireo mponina ao Quebec sy ireo izay mifandray amin'ny alalàn'ny Montréal amin'ny paradisanay mandritra ny vanim-potoana efatra aho. ”
"Faly izahay mahita ity sidina mivantana mivantana avy any Montreal mankany Kelowna ity izay manokatra fahafaha-manao be dia be amin'ny dia an-trano any amin'ny Faritra Thompson Okanagan," hoy i Ellen Walker-Matthews, SR VP ary ny filoha mpisolo toerana ary ny Thompson Okanagan Association Association. "Tsapanay ny fitomboan'ny fangatahana avy any Quebec tato anatin'ny volana maromaro izay tamin'ny fanontaniam-baovao avy amin'ny fitsangatsanganana ara-barotra, haino aman-jery fizahan-tany ary ny tsirairay ary io serivisy mivantana vaovao io dia hanampy amin'ny fampivoarana sy ny fitomboan'ny fangatahana."
Airbus's Airbus A220-300 an'ny Air Canada dia misy seza 12 Class Business ary seza 125 Economy Class miaraka amin'ny fialamboly amin'ny sidina nohavaozina isaky ny seza manerana ny fiaramanidina. Manana habaka manokana manokana ny mpanjifa noho ny sezan'ny toekarena midadasika indrindra amin'ny fiaramanidina, ary ny fitoeram-bokatra lehibe indrindra ho an'ny fiaramanidina mitovy habe amin'izany. Ny fiasa fanampiny dia misy ny varavarankely lehibe kokoa sy ny loko feno LED manodidina sy ny fahazavana azo ovaina izay manampy amin'ny fampihenana ny havizanana rehefa mandeha. Ny valindrihana avo, efitrano soroka fanampiny ary fitehirizana dia mahatonga ity fiaramanidina ity ho tsy manam-paharoa anatiny ao amin'ny faritra tery.
Ny A220 dia manampy bebe kokoa amin'ny fanoloran-tenan'ny tontolo iainana any Canada Canada ny famoahana entona zero hatramin'ny 2050 noho ny motera turbofan miovaova izay kasaina hahatratra hatramin'ny 25 isan-jato ny fihenan'ny solika isaky ny seza. Ny A220 koa no fiaramanidina mangina indrindra amin'ny sokajy misy azy. Vakio ny takelaka misy ny Air Canada Airbus A220 raha mila fanazavana fanampiny.
Ny sidina Air Canada rehetra dia manome ny fanangonana sy fanavotana Aeroplan ary, ho an'ireo mpanjifa mendrika, fidirana amin'ny serivisy laharam-pahamehana, Maple Leaf Lounge ary tombontsoa hafa.
F fahazavana R oute D eparture
Time fiaramanidina Andro fiasana
AC365 Montreal mankany Kelowna 19: 05 21: 35 Airbus A220-300 Alakamisy, talata, talata, talata, masoandro
AC364 Kelowna mankany Montreal 10: 00 17: 30 Airbus A220-300 Alakamisy, talata, talata, talata, masoandro